Imandarmedia.com.np: एक रातमा कति पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्न सक्छन् केटाहरु ?
Lifestyle » एक रातमा कति पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्न सक्छन् केटाहरु ?
एक रातमा कति पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्न सक्छन् केटाहरु ?
सबै मानिसहरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा यौनको बारेमा जान्न चाहान्छ । साथी भाइसँग होस् या जो कोहीसँग पनि उसले यौनको बारेमा जान्ने आशा राखेको हुन्छ ।
यौनको विषयमा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म यौन सम्पर्क गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि खुल्न सकेको छैन । तर, एक स्वस्थ पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ। पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा पटक-पटक यौन सम्पर्कको लागि तयारी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अन्य अवस्थामा कतिपटक हुन्छ त ?
* अण्डकोष : अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अंगलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको पार्टनरलाई सजिलो हुने तरिकाले आफू तयारी हुनु पर्दछ । तपाईंका प्रत्येक स्पर्ष अति नै नरम र सरल हुनुपर्छ किनकी छालाले नै तपाईले दिएको प्रत्येक झड्कालाई मष्तिष्कसम्म पुर्‍याउने काम गर्दछ । अण्डहरुलाई जोशमा कहिले नि थिच्ने अनि चेप्ने गर्नु हुँदैन ।
* स्तन : यौन अवस्थामा पार्टनरलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नको लागि मन छ कि छैन । यदी मन भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् ।
* उत्सर्गतराल : यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो । औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बीचभागमा हल्का दबाव दिन्स् । फलस्वरुप तपाईंको यौन साथीको लिंगलाई सधैं खडा गरिरहन्छ । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई यौनको मज्जा लिन/दिन सक्नुहुन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।